katala moto elektrika
Catalogs momba ny herinaratra
Catalog Of Motors Electric
Mitadiava katala moto elektrika Y2 andiany
Ny motera herinaratra Y2 series dia novolavolaina miaraka amin'ny teknika fanavaozana
Ny vahaolana isan-karazany dia maneho ny teny filamatra misy ny vokatra Regal Beloit. Ny motera elektrika rehetra asongadin'ity katalaogy ity dia mifanaraka amin'ny zava-misy. Katalaogy moto elektrika avy amin'ny mpamatsy Sina. MOTOR FIASA TELO TSY MISY TANANA INDUSTRIAL mifanaraka amin'ny fenitra avo lenta, motera dingana telo indostrialy mifanaraka amin'ny GOST Malagasy. The Ny motera fampidirana squirell-cage telo dingana 5AH dia natao ho an'ny asa maharitra any amin'ny trano am-baravarana.
Y2 Series Serivisy avo lenta fahombiazana avo lenta telo Fitaovana fiara mandeha amin'ny herinaratra
Ilaina tokoa ny fametrahana motera elektrika ataon'ny mpiasa efa za-draharaha, manam-pahaizana ary manana fahefana. Efa ho zato taonan'ny hatsarana tao maotera ary ny famokarana herinaratra. MOTORS électrica CHINA GOST STANDARD, motera elektrônika telo GOST no vokatra vaovao noforoninay ho an'ny tsena Eoropa Atsinanana, toa an'i Russia, Ukraine, sns.
Ny motera Y2 atera dia ao anaty endrika manala baraka sy karazana mpankafy
Dimensions sy andian-dahatsoratra ho an'ny milina elektrika mihodina. Natao ho an'ny tsena eropeana izy io, izay eo an-tampon'ny motera no misy ny boaty fipetrany. izany bokikely mamaritra ny kilasy fahombiazan'ny interna-onal vaovao. Ny lehibe fitsipika ho an'ny motera malefaka ambany. ABB dia manolotra karazany roa amin'ny alàlan'ny herinaratra ambany maotera moto andian-dahatsoratra. Ny motera fampidirana mahazatra, izay be mpampiasa koa amin'ny indostria simika, solika ary gazy, dia aseho amin'ny katalaogera misaraka.
Mitadiava katin-dahatsoratra Yej andian-tsindrimandry
YEJ andian-dahatsoratra elektromagnetika andalana telo motor
China YEJ Series Electromagnetic novakiny katsaka elektrika telo dingana an'ny YEJ Alu telo dingana novakiny motera, YEJ telo dingana novakiny novakiny Motors. Any Eropa, ny angovo mahomby amin'ny motera herinaratra ambany herinaratra.
YEJ andian-dahatsoratra elektromagnetika andiany telo andrana
YDEJ2 andian-dahatsoratra electromagnetic novakiny maotera dia nohatsaraina vokatra ny YEJ andian-dahatsoratra, dia mifanaraka amin'ny JB / T6456 takiana. Imcore dia herinaratra matihanina stator moto sy fanamboarana lamination rotor.
Ny fanoherana elektrika amin'ny potentiometra dia miovaova arakaraka ny vesatra
Vantany vao tafapetraka ny trano misy motera miolakolaka dia averina manamboatra ny bung ao amin'ny toerany. Olana BMW 320d Ny BMW 3 Series no isan'ny varotra lehibe indrindra an'ny orinasa. Miorina any Alemana, ny Bavarian Motor Works - BMW - dia mamokatra fiara mihoatra ny iray tapitrisa isan-taona.
Mitadiava katalana moto DC amin'ny sehatry ny vy
Ny môtô DC matetika no ampiasaina dia ny rindranasa ilaina fanitsiana ny hafainganam-pandeha
Ny milina DC -ntsika dia manolotra safidy marobe amin'ny fametahana fametrahana, rafitra fanamafisana. Manana traikefa maherin'ny 100 taona amin'ny famokarana motera. DC motera Motors & Generators bokotra Motortecnica sy Serivisy.
2 Fandehanana sy fanaraha-maso, môtô sy katalana fielezana herinaratra
Ity katalaogy ity dia manome ny fampahalalana ara-teknika momba ny motera DC ho an'ny fampiharana indostrialy. Ny takelaka angon-drakitra lehibe dia ao anaty vy tsy misy fangarony ary rivet mafy amin'ny zotram-motera.
Fanisana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao misy motera DCelectric indostrialy vaovao ampiasaina sy be loatra amidy. Môtô rivotra-indostrialy, rafitra tsotra, habe kely, lanja maivana, soavaly ambony.
Tsindrio To Download Catalog PDF
Katalogin'ny trano tokana vy sy aluminium
General motera phase motor
Motera fampidirana tranom-borona squirrel dingana telo mahomby. Motera fampidirana pahse tokana. Ity katalaogy mifampiraharaha amin'ny endri-javatra mekanika sy elektrika an'ny motera tranom-borona tsy misy ifandraisany. Amin'ny tranga "fanoherana", ny habetsaky ny herinaratra famatsiana dia avo kokoa ny onja ankehitriny. Ny ezaka rehetra dia natao mba hahazoana antoka fa marina ny angona voatanisa ao amin'ity katalaog ity.
1) Ny maodely rehetra etsy ambony dia dingana tokana afa-tsy ny GF 6739. 2) Motera mpankafy 36 "koa azo alaina amin'ny fangatahana. 3) Tsy voatery misafidy ireo mpandeha haingana. Kilasy misy motera fampidirana tranom-borona telo hafainganam-pandeha tokana. Ireo motera dia azo soratana amin'ny alàlan'ny avo lenta. Maherin'ny 50% ny turnover dia novokarin'ny Electric Motor. Motera elektrika tsy mandeha ho azy sy dingana tokana, voafehy tanteraka. Alimina alimina maty-cast, tsy manilika flange B5 ho an'ny habe 160S.
Moto herinaratra mandeha amin'ny alàlan'ny dingana telo sy avo lenta
Jereo ny katalaogin'i Cantoni Motor amin'ny ankapobeny ao amin'ny katalaogy DirectIndustry. Ny famolavolana, fampahalalana ary sary rehetra aseho ao amin'ity katalaogna ity dia fananan'ny ATT Electric. MORA VOLTAGE MOTORS MOTOR MANARASA DAHOLO IRAY, Ny vidin'ny fividianana motera elektrika sy mpamily, ohatra, dia 1-3 isan-jato fotsiny. Ny trano fonenana aliminioma dia mahatsapa lanja maivana. Mahita fahasamihafana lehibe. Manomboka ny fampisehoana motera fampidirana haingam-pandeha tokana haingam-pandeha ho an'ny herinaratra famatsiana.
Iron Housing PDF Catalog
Aluminum Housing PDF Catalog
Mitadiava katalaon'ny motera herinaratra AEEF
Ny isan'ny moto voasaraka an'io katalaogy io
Famaritana ny môtô andian-tsarimihetsika AEEF dia dingana telo, mihidy tanteraka ary mpankafy-môtô elektrika milamina miaraka amina tranom-borona. Ny fahaiza-miasa dia mahatonga ny TECO Motors haharitra ela kokoa ary hanome fiasa mahomby.
AEEF Series Mihoatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny fanondranana Electric
Ity katalaogy ity dia misy angona teknika ho an'ny motera herinaratra vita amin'ny / ary nazarain'ny OMEC. Motors. Miaraka amin'ny traikefa 100 taona mahery amin'ny famolavolana motera sy ny fampiharana.
Dingana telo an'ny motifika elektrika ivelany AEEFhorizontal
Mpanamboatra sy mpamatsy fanta-daza izahay yt / aeef motera fampidirana herinaratra dingana telo ao Shina. Mihidy tanteraka sy mihamangatsiaka motor motor miaraka am-paosin'i squirrel
Mitadiava katin-jiro herinaratra digger
China 200W Digger Coconut AC Single Phase Electric Motera
China 200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motor, Mitadiava antsipiriany momba ny China Motor, Electric Motor avy amin'ny 200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motor.
200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motera
200w Kôkôla induction dingana iray monja Neal indray dia hanana ireo mpitrandraka sy fanekena hafa. Universal Lighting riant dia manome ny herinaratra ilainao.
Yzb Series Motor Coconut Digger Motor
I Neal indray dia hanana ny azy mpihady diamondra teny ary ny fanekena hafa amin'ny Cavalcade. Rehefa mahazo ny fanontanianao izahay, dia handefa katalaogy manokana, pricelist, milina famonoana voanio palma · jacques gyratory crusher sale.
Mitadiava katalaon'ny singa moto elektrika
Fomba fanolo momba ny indostrialy indostrialy
Ity katalaogy ity dia mampiseho ny faritra fanoloana be mpangataka indrindra amin'ny dingana telo, karazana capacitor. Nanomboka tamin'ny fivarotana fanamboarana maotera elektrika io ary nandritra ny taona maro. Azafady mba zahao amin'ny katalaoginay.
Fomba fanolo ho an'ny motera Electric sy pumps
Makà ny motera soloinao avy any Grainger! Miantsena amin'ny setrin'ny borosy maotera, ny mekanisma fanoloana, loharano môtô. Mahazoa ny vidin'ny ambongadiny sy ny fandefasana maimaim-poana.
Ny vidin'ny fividianana moto elektrika sy fiara
Ny fidirana amin'ny fidirana amerikana Motors Azo alaina eto ny katalaogin'ny marika. Mikaroha bokikely, datasheets & literatiora vokatra hafa koa. Mitadiava haingana ireo faritra sy fampahalalana momba ny serivisy ho an'ny compresseur Copeland Scroll.
Ho an'ny Katalana bebe kokoa, azafady mifandraisa aminay